- Pakistan candidate for the upcoming presidential election of the ruling Pakistan Muslim League-N (PMLN), Mamnoon Hussain arrives to submits his nomination paper at the High Court in Islamabad on July 24, 2013. Pakistan's Supreme Court on July 24 revised the date for the presidential election, asking the election commission to hold it on July 30 instead of August 6. The court made the order as many of the lawmakers who will electareplacement for President Asif Ali Zardari will be paying pilgrimages or offering special prayers on August6for the Islamic holy month of Ramadan, which endsafew days later. AFP PHOTO /AAMIR QURESHI (Photo credit should read AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)	-
पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति ममनुन हुसेनको बुधवार कराँचीमा निधन भएको छ । लामो समय बिरामी रहनुभएका उहाँको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
गत वर्ष फेब्रुअरीमा उहाँलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो भने केही दिनदेखि उहाँलाई कराँचीको एक निजी अस्पतालमा उपचार चलिरहेको थियो । उहाँको उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
हुसेनका श्रीमती र तीन छोरा छन् ।
“अल्लाहले उहाँको आत्मालाई आशिष् दिऊन् र शोक सन्तप्त परिवारजनमा यो अपूरणीय क्षतिलाई सहनको लागि बल दिऊन्,” बाजवालाई उद्धृत गरी आईएसपीआरले लेखेको छ ।